Juan Herranz. Ide ihe, nyocha, ide
Kpọtụrụ - Banyere m
Ó Kedu ihe kpatara? *
Ana m edegara ... *
Nke a bụ ebe a ka m na -adọkpụ ọdụ na ọdịda anyanwụ. Afọ ole na ole agafeela kemgbe oge ahụ mana achọghị m ịgbanwe foto a n'ezie. Ọdachi nke ịgabiga oge na ihe ọjọọ ndị ọzọ ...
Isi ihe bụ na, dị ka ị na-eche ozugbo mgbe ị na-aga na blọọgụ a, m na-ede nyocha na nkatọ tumadi nke akwụkwọ akụkọ, mana na-enweghị ịkpa oke doro anya. Ihe m na-agụbeghị esiwo n’aka ezigbo ndị enyi ma ọ bụ onye ikwu na-agụ ihe. Ya mere, n'etiti anyị niile, anyị na-edepụta oghere a maka philias agụmagụ na phobias nke ịdị ukwuu nke mbụ.
N'ezie, na -eji ohere nke Pisuerga gafere Valladolid, m na -ekwukwa maka akwụkwọ m, nke m na -arara obere oge efu m nwere. Ebe ọ bụ na m nwere ike icheta, na amatabeghị otu m ga -esi jiri mgbada mgbagha ahụ mee ihe ọzọ “bara uru”, m na -eme onwe m dị ka onye edemede akwụkwọ akụkọ na mgbe ụfọdụ m na -edekwa akwụkwọ nyocha.
Na nke ahụ, ihe ọ bụla ịchọrọ ịgwa m, ị nwere ike ịgwa m n'ụdị dị n'elu ☝️.
Maka ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị na -esi ọnwụ ịgụ ihe, m ga -eji ohere ahụ wepụta onwe m nke ọma:
Amụrụ m na Zaragoza na June 14, 1975, n'otu oge ahụ Real Zaragoza gbara ihe mgbaru ọsọ megide Barça na nkeji iri na ise nke Copa del Rey. Site n'ụlọ ọgwụ, n'akụkụ Romareda, nna m mere ememme ahụ na ọmụmụ m. Ọmarịcha ọmarịcha dị ka onye egwuregwu bọọlụ nke dị mkpirikpi nyere ikike adịghị mma m nwere bọọlụ n'etiti ụkwụ m. Ikekwe ọ bụ ya mere, mgbe m nwetasịrị diplọma nke gụsịrị akwụkwọ na mahadum, etinyere m uche n'ihe omume ntụrụndụ ọzọ, ide ihe, ịgbatị agụụ ochie nke ichepụta ihe.
Kemgbe m bipụtara akwụkwọ akụkọ mbụ m, laa azụ na 2001, Anọ m na -achọta akụkọ ọhụrụ ịkọ na oge dị mkpa iji nọdụ ala dee ha. Ọ dịghị ihe a na -amanye, ha na -ebilite n'amaghị ama ma ọ bụ mmadụ na -enyefe m ha wee mechaa kwenye m. A na -emepụta usoro a n'ụzọ a na -atụghị anya ya, ka a na -eme ya kwa ụbọchị n'etiti echiche na akwụkwọ.
N'ihi ya, m na -anụ ụtọ ọrụ onye edemede n'ụzọ nke m. Mgbe m leghachiri anya azụ m na -ahụ, n'etiti ihe ijuanya na afọ ojuju, akwụkwọ iri na abụọ bipụtara n'azụ m: "Ncheta nke anụ ọhịa wolf","Ohere nke abuo","Akụkọ Cassandra","igbanwe","Site na bọọlụ bọọlụ","Ndị agha Ejea","Na -eche ndị mmụọ ozi", «El sueño del santo"," Real Zaragoza 2.0 "" Akụkọ ifo efu""Esas estrellas que llueven"Na" ogwe aka nke obe m". Mkpali ịnọgide na -ede ihe ka echiche ọhụrụ pụtara.
Akwụkwọ akụkọ "Ncheta anụ ọhịa wolf" Editorial Egido, 2001
Akwụkwọ akụkọ "Ohere nke abụọ" Mira editores, 2004
Mpịakọta: "Akụkọ Cassandra" Espiral Editorial, Bilbao, June 2006
Mmekọrịta akwụkwọ "Nke ihe anyị bụ ma ka ga -adị" Ejea 2002
Onye ntinye akwụkwọ: "Ihe e kere eke Saturnian" Association ndị edemede Aragonese 2007
Onye nchịkọta akụkọ Dossier "Ndị okike na -eto eto, 2.002" Ejea de los Caballeros
Akwụkwọ nchịkọta akụkọ nke akwụkwọ akụkọ mpaghara "Ágora"
Itinye aka na akwụkwọ edemede "Ihe okike Satọde" na nọmba 6 nke 2008
Isi nchịkọta akụkọ nke akwụkwọ ebe nchekwa nke SD Ejea. June 2008
Akwụkwọ: "The fighter of Ejea". June 2009
Akwụkwọ akụkọ: "Gbanwee" Editorial Andrómeda - nchịkọta ụwa dị egwu. Machị 2010
Akwụkwọ akụkọ: "Na -eche ndị mmụọ ozi" - mbipụta Brosquils. Jenụwarị 2011
Onye nchịkọta akụkọ nke akwụkwọ ngosi ihe ngosi María Luna: «Esencial y Cotidiano»
- akwụkwọ akụkọ: «El sueño del santo»- Lee ndị editọ. 2013
-Novela: "Real Zaragoza 2.0" - Mira Editores. 2014
- Olu: "Akụkọ ifo furu efu" - Libros.com 2015
- akwụkwọ akụkọ: «Esas estrellas que llueven»- Lee ndị editọ. 2016 (akụkụ nke abụọ nke «El sueño del santo»)
-Novel: "ogwe aka nke obe m" - Amazon. 2016
ỤBỌCHỊ NA EBUBE:
Asọmpi Akụkọ Nrite nke 1st Nkụzi Afọ iri ise Ọkara Cinco Villas 2002
Ihe Nrite Nrite 1st Akụkọ Nkịtị Asociación Cultural Fayanás 2004
Asọmpi mkpụmkpụ akụkọ mba ụwa nke ikpeazụ '' onye na -enweghị ndidi '' 2004
Asọmpi mkpirikpi akụkọ mkpirikpi X "Juan Martín Sauras" 2005
Onye ikpeazụ n'ime Asọmpi Akụkọ ifo Coyllur-Science International 2005. Peru
Ikpeazụ m Abaco 2006 Asọmpi Akụkọ Nta
Asọmpi 1st Prize XI nke akụkọ dị egwu Gazteleku 2006
Asọmpi ihe nrite nke abụọ nke akụkọ ihe ngosi ihe ngosi nka nke mba Basque 2
Ihe nrite 1st XVII Short Novel Contest "Calamonte 2007"
Asọmpi nke anọ nke akụkọ akụkọ "Villa de Cabra del Santo Cristo 4"
Mkpọpụta Pụrụ Iche Pụrụ Iche, na akwụkwọ akụkọ, nke 2007 Andrómeda Awards
Asọmpi nkenke akụkọ mkpirikpi nke anọ IV "Villa de Cabra del Santo Cristo 5"
Onye na-agba ọsọ Finalist VI Briareo Short Story Contest. Cuenca 2008
Onye ikpeazụ m na -asọrịta mpi "Cuentamontes" Elda 2008
Asọmpi egwu egwu ikpeazụ nke "Villa de Maracena" 2008
Onye ikpeazụ XII Gazteleku de Sestao Short Story Contest 2009 (…)
Asọmpi ndepụta maka ndị ọka iwu Mee-June 2010
Ọ fọrọ nke nta ka m nwee akwụkwọ m niile ebe a, n'otu ịpị:
ỊKỌRỌ NDỤMỌDỤ NA ỌTỤTỤ ọ́bá akwụkwọ gị
N'iji nnukwu arụmọrụ m na -eme na ụwa akwụkwọ, ọ dịla anya m sonyeere ụwa na -atọ ụtọ nke ide ọdịnaya. Site na ntuziaka ndị kacha mkpa na echiche ikpughe, enwere m ike idere gị ederede nke ọdịdị nkeonwe, ntinye maka blọọgụ gị ma ọ bụ post nke ị ga -eji rịa ọnọdụ na injin ọchụchọ ịntanetị.
Edemede ọdịnaya nwere aghụghọ ya. Okwu ga -eme ọtụtụ ihe karia ijikọta ọnụ iji mepụta ahịrịokwu. Ha ga -atụ aro, tụọ aro, kpalie, kpalie, ọbụna dee egwu ma bụọ abụ iji ghọta ndị na -agụ ha, dị ka egwu siren nke a na -apụghị iguzogide ma ọ bụ na -akpali akpali.
N'ikpeazụ, ide ihe niile akwụsịghị ịbụ akwụkwọ; n'ebumnuche nke ịkpasu mmetụta ma ọ bụ ibunye echiche; na ọchịchọ iji kwenye ma ọ bụ mmasị ikpughe.
Site na ide ị mụta ide ihe. Mgbe ihe karịrị afọ iri na ise pịa akwụkwọ ozi na mkpụrụedemede ndị ọzọ, yana akwụkwọ iri na abụọ n'azụ m na ọtụtụ narị ọrụ ide ihe ka emechara, amaara m na m nwere ike nyefee echiche na echiche site n'akwụkwọ ahụ kpachaara anya na -adaba na ederede ọdịnaya niile dị mma.
Gaa n'ihu gwa m ihe ị chọrọ ka m gwa ụwa gị. Ka m chọta okwu gị kacha mma.